Ny herinandro tao amin’ny bilaogy Palestiniana: Voina nitranga teny amoron-dranomasina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Aogositra 2018 3:18 GMT
Nanimba ny andro nahafinaritr'ireo fianakaviana Palestiniana izay nanamboatra tranom-pasika teo amin'ny moron-dranomasin'i Gaza ny daroka baomba nataon'ny Israeliana. Namaritra tsara ny zava-nitranga niaraka tamin'ny tantaran'ny ankizivavy kely iray namoy ny ray aman-dreniny sy ny anadahiny miisa telo ary ny rahavaviny ilay bilaogera sady mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona, Mona El-Farra.
Namoaka lahatsary avy amin'ny tati-baovao nalefa taorian'ny fanafihana i Moi niaraka tamin'ny filazana mampalahelo tanteraka hoe:
Nisy fiantraikany teo amin'ireo bilaogera Palestiniana hafa ny lahatsary, toa an'i Haitham Sabbah izay niteny hoe: “Raha nijery izany rehetra izany sy ny maro hafa tao amin'ny Palestine TV sy Aljazeera, izaho sy ny vadiko ary ireo zanako rehetra dia nanomboka nitomany avokoa.”
Tsy afaka tao an-tsain'i Khaled Nazzal ny fahatsapana ho zava-poana, fihetseham-po iray izay nozarain'ilay bilaogera Al-Falasteenyia sy ilay mponina ao Gaza Laila El-Haddad any an-tany lavitra izay nilaza avy hatrany hoe: “Niantso ny nenitoako izahay, izay niara-miasa tamin'ny hopitaly al-Awda any avaratr'i Gaza. Mpihomehy lalandava izy io, ary vehivavy tsy dia misavoritaka firy loatra .”
Zavatra iray no azo antoka: afaka miova haingana ny herinandro ao Palestina. Lavitra ireo zava-nitranga vao haingana, nanana hevitra nahaliana vitsivitsy momba ny vakokira Jodeo-Arabo tamin'ny fiandohan'ny herinandro i Amal Amireh.
Raha nanomboka ny Ambora Erantany dia nanoratra i Moi momba ny sarimihetsika iray mahaliana mitondra ny lohateny hoe “World Cup Inshallah” izay manadihady ny fahasarotan'ny fanabeazana sy ny fampiofanana ny ekipa Nasionaly Palestiniana niezaka ny ho tafiditra hilalao Mondialy. Nandritra izany fotoana izany, nibilaogy momba ny hatezeran'ny Palestiniana -Isiraeliana tamin'ny saram-pisoratana anarana tamin'ny Mondialy i May ao amin'ny KabobFest.
Faly i Ohoud nandre fa nahavita ny zava-bita tsara indrindra tamin'ny Guiness World ny tanàndehiben'i Ramallah taorian'ny nanamboaran'ny toeram-pisakafoana iray ny sakafo Tabouleh lehibe indrindra.
Any amin'ny faritra hafa, nanomboka ny Fanentanana Fahafahan'ny Fahavaratra izay fanaony isan-taona manomboka ny volana Jolay sy Aogositra ny Hetsika Firaisankina Iraisampirenena (ISM), saingy indrisy fa nifandona tamin'ny fanalam-baraka vao haingana izay nikasa ny hanohintohina ny asany izy ireo. Na dia izany aza anefa dia toa vao mainka nankahery ny iraka nataon'izy ireo tamin'ny fanoherana tsy nisy herisetra izany.